Chivabvu 21, 2018 arun
Philippines SEC mumiririri anokumbira crypto wekuongorora’ inofambiswa mitemo
The Philippines 'musika regulator, ari kuchengetedzeka uye Exchange Commission, achitsvaka mazano crypto uye blockchain “wekuongorora” kubatsira masangano hurumende drafting mitemo yakakodzera nokuda nzvimbo.
SEC Commissioner Ephyro Luis Amatong akataura pamusangano of Philippine Association of Digital Commerce uye Decentralized Industry, akati:
"Hurumende anoda proactive mukusika mitemo pamusoro cryptocurrency. Tinoda kuita zvose wekuongorora nokubvunza kuti zvaunofunga yenyu. Hatidi kuti kurambidza chinhu nokungoti hatinzwisisi chinhu. Ndokusaka inofambiswa yako pamwe zvinokosha saka tinogona kuuya ane utongi yakakodzera pamusoro cryptocurrency wokutengesera. "
enyika Colorado vaigona nokukurumidza kugamuchira crypto mipiro
Mamiriro Colorado aigona nokukurumidza achibvumira matare enyika kugamuchira mipiro mu cryptocurrency.
The Office of Colorado Munyori weHurumende akabudisa idzva kushanda nekubatwa ayo “Mitemo Pamusoro Campaign uye Political Finance” izvo zvikurukuru inosanganisira chikamu chitsva pasi cryptocurrency mipiro.
The dzichitaurwa nhungamiro inoti:
“Dare anogona kugamuchira mipiro mu cryptocurrency, kusvikira zvinogamuchirika muganhu kuti mari kana mari nomupiro. Huwandu mupiro ndiko kukosha cryptocurrency panguva mupiro. The komiti anofanira kushuma chero pfuma kana kurasikirwa pashure mupiro sezvo dzimwe mari kana pakutengeserana.”
Rashiya & Iran vanobvumirana kuti cryptocurrencies zvinogona kushandiswa kudzivisa KURUMIDZAI uyewo zvirango
Irans musoro zvoupfumi zvakanangana, Mohammad Reza Purebrakhim, akarondedzera kushandisa mari digitaalinen sezvo zvinoreva kutiza pokudzora kwomudzimu dhora sechinhu “vaizotibata kutungamirira.”
Izvi chakakurukurwa pamusangano pamwe musoro Russian Federation Council Committee iri Economic Policy Dmitry Mezentsev apo vose Russia uye Iran akatsanangura crypto se kuva Kutsiviwa kwemari KURUMIDZAI interbank mubhadharo hurongwa, Kushandiswa izvo kwaizoratidzawo simba chero dzibvise zvirango kwakaitwa nyika, kuita Russia muna pamwe Iran kubatsirwa izvi kushandisa crypto.
CoinGate kuti vomurova Bitcoin Mheni Network mubhadharo kugadzira
Payment processor basa CoinGate akatanga kuedza Mheni Network.
The kambani iri tariro yokuva wokutanga mubhadharo processor kugamuchira LN kubhadhara mumamiriro ezvinhu mhenyu.
Kuva blockchain yokuvaka
Kana uri kurota ...
Bitmain pamusoro wayo nzira t ...
Chivabvu 28, 2018 pa 1:46 PM
Chivabvu 28, 2018 pa 7:55 PM
Chikumi 21, 2018 pa 8:41 PM